Mould Dhizaini & Kugadzira - Dongguan Chengda Rubber & Plastic Technology Co, Ltd.
Mould dhizaini timu ndiyo kiyi yeRubber & Plastiki tekinoroji, ese eakaumbwa emarabha zvikamu & zvikamu zvesilicone zvakarongedzwa uye zvakagadzirwa neforoma dhizaini timu, isu tinogona kukubatsira kugadzirisa akasiyana matambudziko ezvinoumba kana iwe ukatiunzira iro rabha kana mapurasitiki mapurojekiti. Iwo poindi ekuumbwa dhizaini:
Optimum muforoma mamiriro kuona mukuru-kunyatsoshanda kugadzirwa.
Teerera zvinodikanwa zvekudhirowa, kudzora kushivirira kudzora.
Kwete-tambo-tambo pane akakosha maficha enzvimbo dzerabha kana silicone zvikamu.
Muforoma mutengo uye chakuvhuvhu upenyu.
Mutsindo Mould Kugadzira Technology:
Chengda Rubber & Plastiki ane hunyanzvi mahunyanzvi vane yakatanhamara tekinoroji yeforoma nhema uye nemoyo wakazvipira maitiro, ndosaka tichiramba kugona pane zvakajairwa zvigadzirwa zverabha uye yetsika silicone zvigadzirwa zvigadzirwa munda.
Vazhinji vevanamakanika nevashandi vanoshanda muChengda Rubber & Plastiki kwemakore mazhinji uye vane zvakapfuma zviitiko muforoma nhema, isu tinotarisira zvese zvidiki diki pane kugadzirisa, kuve nechokwadi chekugadzira yakakwira chaiyo uye yakareba-yehupenyu mafuru erabha kana epurasitiki zvigadzirwa zvigadzirwa.